Ntaolo Info. About. What's This?
Teo aminny Ntaolo raha manonona ny vazan-tany izy dia toy izao no fanaovany izany: tononiny aloha indrindra ny avaratra, izay vao ny atsimo, avy eo ny antsinanana ary faranany aminny andrefana. Tsy azo avadika izany filaharana izany fa toy ny mampitsimbadika ny filaminana misy aminny tontolo. Ohatra:" any ianareo zanahary avaratra, zanahary atsimo, zanahary antsiananana, zanahary andrefana". Araka izany dia samy manana ny filaharany sy ny heviny avokoa ny vazan-tany efatra teo aminny Ntaolo. Ny avaratra anefa no ambony sy manan-danja indrindra. Ara-tantara dia taminny andronAndriamanelo no ...
Ny fasana dia zavatra naorina mba hiarovana ny toerana nandevenana na nanafenana ny maty. Araka ny finoan ny olona sasany, isan izany ny Ntaolo malagasy, dia io no toerana hita maso izay sady mampahatsiahy ny fahafatesana no mampifandray ny tontolon ny velona sy ny tontololon ny maty koa. Ao no itoeran ny razana amin ny androny sisa rehetra.
Ny ody dia tapa-kazo na tapa-javatra hafa izay ninoanny Ntaolo malagasy fa manan-kery hitondra ny soa sy hiaro aminny loza. Karazana sampy isam-batanolona ny ody, ka ninoana fa miaro na manome hery ny olona mitondra na miravaka azy. Ny olona avy aminny saranga rehetra dia afaka mitahiry ody. Mety ho tsara ny ody nefa koa mety ho ratsy.
Ny ambiroa, araka ny finoan-drazana malagasy, dia singa ara-panahy izay inoanny Ntaolo malagasy fa maharitra aorian ny fahafatesana. Mety hialanny ambiroany vetivety ny olona iray ka hanjary ho verivery hevitra na verivery tadidy. Miverina ao aminny olombelona ihany ny ambiroa rehefa avy niala tao. Ny tsy fiverenanny ambiroa dia miteraka fahafatesana. Azo atao araka izany ny manala ambiroa na mampody ambiroa ny olona iray.
Ny fambara izay tsy inona fa zava-mitranga tsapanny olona ka manampy azy hahalala mialoha ny zavatra hitranga aminny hoavy akaiky na lavitra. asehonny andriamanitra na ny fanahy hafa. Inoanny Ntaolo malagasy koa ny fisianny fambara. Mety ho zava-tsoa no hitranga nefa matetika dia zava-dratsy no ahenoana ny teny hoe fambara, toy ny hoe fambara loza. Tsy voatery ho i Zanahary ihany no mandefa fambara fa mety ny razana na ny fanahy hafa rehetra.
Ny Ntaolo dia ireo razam-be tany aloha. Mitory fanajana sy fankatoavana ny fahendreny ihany koa ny fampiasana ny teny hoe Ntaolo. Araka izany dia manana ny hajany teo aminny fiaraha-monina malagasy tokoa izany hoe Ntaolo izany. Ny fototeny dia ny hoe "aolo" izay midika hoe aloha,nandrafetana ihany koa ny teny aoloana. Ny hoe "ntaolo" dia entina ilazana ireo nialoha lalana. Raha ara-bakiteny, ny mifanohitra aminy dia ny hoe "tafara" izay entina milaza ireo avy sy ho avy aoriantsika. Ny tandroy no tena mahay manonona azy aminny fomba mampivoitra ilay fototeny.